Umgangatho ophezulu weHex bolt yoMvelisi kunye noMthengisi | Yanzhao
Iibholiti ze-Hex zisetyenziselwa ukubopha iinxalenye ezimbini okanye ezingaphezulu ukwenza indibano nokuba ayinakwenziwa njengenxalenye enye okanye ukuvumela ulondolozo kunye nokulungiswa kokuphazanyiswa. banentloko ene-hexagonal kwaye beza nemisonto yomatshini yokuphatha ngokuqinileyo nangokurhabaxa.
Iibholiti ze-Hex zisetyenziselwa ukubopha iinxalenye ezimbini okanye ezingaphezulu ukwenza indibano nokuba ayinakwenziwa njengenxalenye enye okanye ukuvumela ulondolozo kunye nokulungiswa kokuphazanyiswa. banentloko ene-hexagonal kwaye beza nemisonto yomatshini yokuphatha ngokuqinileyo nangokurhabaxa. Ziza kuluhlu olwahlukileyo lwee-bolt ze-hex bolt zezicelo zesiko ngokuxhomekeke kwiimfuno zayo ezibonisa ubukhulu. Ezi zi-Hex Bolts zingena ngentsimbi ye-anti-corrosion, i-alloy yentsimbi kunye nezinto zentsimbi eziqinisekisa ukuba ulwakhiwo alwenzi buthathaka ngenxa yomhlwa. Kuxhomekeke kubude bebholiti, inokuza ngomsonto oqhelekileyo okanye umsonto ogcweleyo.
Iibholiti zeHex zingasetyenziselwa usetyenziso olwahlukeneyo olubandakanya ukukhawulezisa iinkuni, intsimbi, kunye nezinye izinto zokwakha zeeprojekthi ezinjengeedokodo, iibhlorho, izakhiwo zohola wendlela kunye nezakhiwo. Iibholithi ze-Hex ezineentloko ezibiweyo zihlala zisetyenziswa njengeebhloko ze-anchor.
Izikere zentsimbi emnyama ezimnyama zithomile ukumelana nokuthamba kwiindawo ezomileyo. Izikere zentsimbi ezifakwe intsimbi zinciphisa umhlwa kwiindawo ezimanzi. Izikulufu zentsimbi ezimnyama ezinganyangekiyo umhlwa kunye neeklinikhi kwaye zimelana neeyure ezili-1 000 zetyuwa yokutshiza ityiwa. khetha ezi zikhonkwane ukuba awuyazi imisonto nge-intshi. Imisonto entle kunye neyongezelelweyo-ethe-ethe yahlulwa ngokusondeleyo ukunqanda ukukhululeka kukungcangcazela; ukucoca umsonto, kokukhona ukuxhathisa.
Intloko ye-bolt yenzelwe ukuba ilingane i-ratchet okanye i-spanner torque wrenches ekuvumela ukuba uqinise i-bolt kulwazi oluchanekileyo. I-Hex head bolts zihlala zisetyenziselwa ukwenza indibaniselwano ebotshiweyo, apho ishafti enomsonto ilingana ngqo nomngxunya okanye i-nut ehambelana nayo. Iibholiti zeBakala 2 zihlala zisetyenziselwa ukwakha ukudibanisa izinto ezenziwe ngomthi. Iibholiti zebakala 4.8 zisetyenziswa kwiinjini ezincinci. IBakala 8.8 10.9 okanye i-12.9 iibholithi zibonelela ngamandla aphezulu. Olunye uncedo lweebholithi ezinama-welds okanye ii-rivets kukuba zivumela ukwenziwa lula kokulungiswa kunye nokugcinwa.
Egqithileyo Izikrufu zeDrywall
Okulandelayo: Esisangqa Head Bolts
Ukwaleka okuMnyama kweHex Bolts
I-Oxidation emnyama yeHex Bolts
I-Hexagon Socket Head Bolts
Amandla aphakamileyo eHex Bolts
I-Hexagon Socket Bolts
Esisangqa Head Bolts
I-Oxidation emnyama yeHex Bolts, I-Hexagon Socket Head Bolts, Din6921 esisangqa Amandongomane, Ukwaleka okuMnyama kweHex Bolts, Amandla aphakamileyo eHex Bolts, Iibholiti,